बनेपामा एमालेको विशाल विजयी जुलुस, कांग्रेसमाथि खनिदै ओलीले के भने ? (हेर्नुस् तस्वीरहरु) - Dainik Nepal
बनेपामा एमालेको विशाल विजयी जुलुस, कांग्रेसमाथि खनिदै ओलीले के भने ? (हेर्नुस् तस्वीरहरु)
दैनिक नेपाल २०७४ जेठ ५ गते १७:३४
बनेपा, ५ जेठ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पहिलो चरणको स्थानीय चुनावको परिणामले एमाले कार्यकर्ताले अझै मेहनत गर्नुपर्ने देखाएको बताउनुभएको छ ।
स्थानीय चुनावमा इतिहासमै पहिलो पटक बनेपा नगरपालिकामा एमालेले जितेपछि शुक्रबार आयोजित विजय उत्सवमा सहभागी हुन बनेपा पुग्नुभएका ओलीले ‘बिग्रिसकेको कांग्रेसले किन यत्रो भोट ल्यायो ? कुनै सिद्धान्त र बिचारबाट च्यूत भइसकेको कांग्रेसको बारेमा जनतालाई प्रष्ट पार्न बाँकी नै रहेछ, हामीले अझै मेहनत गर्नुपर्ने भयो’ भन्नुहुँदै चुनावी समिक्षा गर्नुभयो ।
उहाँले एमालेले धेरै काम गरेको र राष्ट्रियताको पक्षमा अडान लिँदापनि कांग्रेस एमालेको हाराहारीमा आएकोमा आश्चर्य प्रकट गर्नुहुँदै एमाले कार्यकर्ताले अझै मेहनत गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
‘बनेपालाई आधुनिक सहर बनाउँछौं’
अध्यक्ष ओलीले विजयी सभालाई सम्बोधन गर्दै एमालेले अब बनेपालाई आधुनिक शहर बनाउने दाबी गर्नुभयो । ‘यसअघि लक्ष्मी नरसिंह बादेलाई किन जिताएनछौं भनेर तपाईहरुलाई पश्चताप हुने वाला छ’ ओलीले भन्नुभयो, ‘अब हामीले बनेपालाई बनाएर देखाउँछौं ।’
नेपाली कांग्रेसको गढ मानिएको काभ्रेको बनेपा नगरपालिकामा एमाले उम्मेदवार विजयी भएपछि विजय जुलुसमा सहभागी हुन एमाले अध्यक्ष केपी ओली बनेपा आउनुभएको थियो ।
बनेपाको मेयरमा एमालेका उम्मेदवार लक्ष्मी नरसिंह बादेले ९ हजार ६ सय १७ मत पाएर विजयी भएका थिए । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी राम जोशीले ८ हजार २ सय ७१ मत पाएका थिए । बनेपा काङ्ग्रेसको पकेट क्षेत्र मानिन्थ्यो ।